Ufuna ukuNgqinisisa i-DNS ekuhlaleni usebenzisa iiMikhosi kwi-OSX? | Martech Zone
Ufuna ukuNgqinisisa i-DNS ekuhlaleni usebenzisa iiMikhosi kwi-OSX?
Lwesine, ngoFebruwari 21, 2019 NgoLwesihlanu, Februwari 22, 2019 Douglas Karr
Omnye wabathengi bam uhambise iwebhusayithi yabo kwiakhawunti enkulu yokubamba. Bahlaziye useto lwedomain yabo ye-DNS kwiirekhodi ze-A kunye ne-CNAME kodwa babenexesha elinzima lokumisela ukuba ingaba isiza sisombulula i-akhawunti entsha yokubamba (Idilesi entsha ye-IP).
Kukho izinto ezimbalwa zokugcina engqondweni xa usombulula ingxaki kwi-DNS. Ukuqonda ukuba zisebenza njani i-DNS, ukuqonda ukuba uMbhalisi weDomain yakho usebenza njani, kwaye uqonde ukuba umphathi wakho ulawula njani ukungena kwabo kwesizinda.
Isebenza njani iDNS
Xa uchwetheza idomeyini kwisikhangeli:
Idomeyini ijongiwe kwi-Intanethi igama lomncedisi ukukhangela apho kufuneka sithunyelwe khona isicelo.
Kwimeko yesicelo sedomain sewebhu (http), igama lomncedisi liya kuthi ibuyisela idilesi ye-IP kwikhompyuter yakho.
Ikhompyuter yakho igcina le ndawo, eyaziwa njengeyakho Indawo efihlakeleyo ye-DNS.
Isicelo sithunyelwe kumamkeli-zindwendwe, ohambisa isicelo ngaphakathi kwaye izisa indawo yakho.
Usebenza njani kuMgcini zincwadi zobhaliso lwakho
Inqaku koku… ayinguye wonke umbhalisi wethambeka olawula i-DNS yakho. Ndinomthengi omnye, umzekelo, ababhalisa imimandla yabo nge-Yahoo! Yahoo! ayilawuli ngokwenyani idomain nangona ibonakala injalo kulawulo lwabo. Bangumthengisi nje we IiTucows. Ngenxa yoko, xa usenza utshintsho kuseto lwakho lwe-DNS kwi-Yahoo!, Kungathatha iiyure ngaphambi kokuba olo tshintsho luhlaziywe yenene umbhalisi wedomeyini.
Xa useto lwakho lwe-DNS luhlaziywa, ziya kuthi ke zilungelelaniswe kuluhlu lweeseva kwi-Intanethi. Uninzi lwexesha, le nto ithatha nje imizuzwana embalwa ukuba yenzeke. Esi sizathu esinye sokuba abantu bahlawule i-DNS ephethwe. Iinkampani ezilawulwayo ze-DNS zihlala zinobunzima kwakhona kwaye zikhawuleza ngokukhawuleza… zihlala zikhawuleza kunombhalisi wesizinda sakho.
Nje ukuba iiseva ze-Intanethi zihlaziyiwe, kwixesha elizayo xa inkqubo yakho isenza isicelo se-DNS, idilesi ye-IP apho indawo yakho ibanjwe ibuyiselwa. PHAWULA: Gcina ukhumbula ukuba ndithe kwixesha elizayo xa inkqubo yakho isenza isicelo. Ukuba ubukhe wacela ukuba idomeyini, i-Intanethi inokuba sele ihlaziyiwe kodwa inkqubo yakho ingasombulula idilesi ye-IP yakudala ngokusekwe kwi-DNS Cache yakho.
Isebenza njani i-DNS yomgcini wakho
Idilesi ye-IP ebuyisiweyo kwaye igcinwe ngenkqubo yendawo yakho ayiqhelekanga kwiwebhusayithi enye. Umgcini unokuba neshumi okanye nangamakhulu eewebhusayithi ezibanjwe kwidilesi enye ye-IP (ngesiqhelo iserver okanye iseva ebonakalayo). Ke, xa i-domain yakho iceliwe kwidilesi ye-IP, umgcini wakho uqhubela phambili isicelo sakho kwindawo ethile kwifolda ngaphakathi kweseva kwaye uzisa iphepha lakho.
Indlela yokujongana neengxaki zeDNS
Ngenxa yokuba kukho iinkqubo ezintathu apha, kukho iinkqubo ezintathu zokujongana neengxaki! Kuqala, uya kufuna ukujonga nje inkqubo yendawo yakho ukuze ubone ukuba idilesi ye-IP yalatha phi kwinkqubo yakho:
Oku kwenziwa ngokulula ngokuvula iwindow yeTheminali kunye nokuchwetheza:
Okanye unokwenza igama elithile ukujonga iserver:
Ukuba uhlaziye useto lwe-DNS kwindawo yakho yobhaliso lwesizinda, uyakufuna ukuqinisekisa ukuba i-cache yakho ye-DNS iyacaciswa kwaye uya kufuna ukwenza isicelo kwakhona. Ukucoca i-cache yakho ye-DNS kwi-OSX:
I-sudo dnscacheutil -flushcache
Ungaphinda uzame i- ping or nsokuokup ukubona ukuba i-domain iyasombulula kwidilesi entsha ye-IP okwangoku.
Inyathelo elilandelayo liya kuba kukubona ukuba ii-Internets DNS server zihlaziyiwe na. Gcina Izixhobo ze-DNS Iluncedo koku, unokufumana ingxelo epheleleyo ye-DNS ngeqonga labo elilunge kakhulu. Flywheel ine-DNS Checker enkulu kwiqonga layo apho baya kuhamba khona Uphando, OpenDNS, I-Fortalnet, kunye neeNethiwekhi zokuKhangela ukubona ukuba useto lwakho luye lwasasazeka ngokufanelekileyo kwiwebhu.
Ukuba ubona idilesi ye-IP iboniswe ngokufanelekileyo kwiwebhu kwaye indawo yakho ayibonisi, ungadlula nakwiiseva ze-Intanethi kwaye uxelele inkqubo yakho ukuba ithumele isicelo ngqo kwi-Idilesi ye-IP. Unokukufeza oku ngokuhlaziya ifayile yakho yokubamba kwaye ucofe i-DNS yakho. Ukwenza oku, vula iTheminali kwaye uthayiphe:
sudo nano / njl / imikhosi
Faka iphasiwedi yakho yenkqubo kwaye cinezela ukungena. Oko kuyakuzisa ifayile ngqo kwiXesha lokuhlela. Hambisa isikhombisi sakho usebenzisa iintolo zakho kwaye ungeze umgca omtsha nedilesi ye-IP elandelwa ligama lesizinda.
Ukugcina ifayile, cinezela ulawulo-o Kwikhibhodi yakho emva koko ubuyele ukwamkela igama lefayile. Phuma kumhleli ngokucinezela ulawulo-x, eya kukubuyisela kwilayini yomyalelo. Ungalibali ukuhlamba i-cache yakho. Ukuba indawo ayivelanga ilungile, kunokuba yingxaki kwinginginya yakho kwaye kufuneka unxibelelane nabo ubazise.
Inqaku lokugqibela… ungalibali ukubuyisela ifayile yakho yenginginya kuhlobo lwayo lokuqala. Awufuni kushiya ungeno oluya apho ufuna ukuzihlaziya ngokuzenzekelayo!
Ngokulandela la manyathelo, ndakwazi ukuqinisekisa ukuba amangenelo e-DNS kumbhalisi ayesemgangathweni, ungeniso lwe-DNS kwi-Intanethi lwalusemgangathweni, i-cache yam ye-DNS ye-Mac yayihlaziyiwe, kwaye i-DNS yomgcini wewebhu yayiphezulu ukuza kuthi ga ngoku… kulungile ukuhamba!
I-Moosend: Ukuthengisa nge-imeyile kunye nokuZenzekelayo